Scanner an'ny karatra AtEvent: manaova automatique sy manatsara ny fakana sary amin'ny hetsika | Martech Zone
Scanner an'ny karatra AtEvent: manaova automatique sy manatsara ny fakana sary amin'ny hetsika
Talata, Jona 2, 2015 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Handeha any Chicago aho rahampitso mba hanao dinidinika amina orinasa marobe ao amin'ny Fihaonambe sy fampirantiana mpivarotra an-tserasera. Ny dingana mahazatra ahy momba izany dia ny firaketana ireo tafatafa mandritra ny tontolo andro, manoratra naoty, manangona karatra fandraharahana, ary avy eo mankanesa any amin'ny efitranon'ny hotely misy ahy rehefa miaraka mihinana zava-pisotro ny rehetra.
Alohan'ny hanadinoako na inona na inona, alefako any amin'ny LinkedIn daholo ny fifandraisana ary avy eo manoratra ho ahy ho anao amin'ny fanarahana izay ilaina. Mety hisy, tsy hahita mpivady aho ary hikasika ny herinandro vitsivitsy izy ireo manontany tena hoe inona no nitranga. Raha ny marina rehetra dia heveriko fa feno fatratra aho saingy misy olona malahelo foana. Eny… misy fampiharana ho an'izay!
Ny fampiharana finday Card Scanner ao amin'ny Event dia natao ho an'ny mpivarotra hanangona angon-drakitra fifandraisana amin'ny hetsika amin'ny alàlan'ny fampidirana mivantana na ny fizahana ny karatra fotsiny ary amin'ny fampiasana OCR (Recognition Character Optical). Ary miaraka amin'ny fampiharana azy ireo miharo tanteraka - azonao atao ny manosika izany data izany hatrany amin'ny CRM (Customer Relation Management) miaraka amin'ny loharanom-pahalalana voalaza mazava tsara.
Ny app an'ny Scanner atEvent dia ampifandraisina tanteraka amin'ny rafitra fanodinana automatique be mpampiasa sy azo itokisana indrindra ary CRM, ahafahan'ny mpivarotra an-tsaha mamindra ho azy ireo ny angon-drakitra antonony tena marina amin'ny rafitra tiany ary manomboka ny fizotrany fitarihana mitarika eo noho eo.
Raha toa ianao ka nampiditra atEvent tamin'ny Marketing Automation sehatra, azonao atao ny manangana fanentanana avy hatrany amin'ny fifandraisana.
Ny mampiavaka azy amin'ny sehatra atEvent dia ny fifandraisana koa tafangona amin'ny ambaratonga fandaminana, ahafahan'ny matihanina mivarotra mahita fifandraisana miaraka na ara-tantara miaraka amin'ny fikambanana amin'ny hetsika rehetra niasan'ny ekipan'izy ireo.
Ny sehatra dia miaraka fanaovana tatitra amin'ny fotoana tena izy izay hanaraha-maso ny vokatra azo avy amin'ny ekipan'ny varotrao avy amin'ny biraonao na ny hetsika post.
Tags: atventscanner karatra orinasamitarika fitarihanascanner karatrafisamborana mpitarika ny fihaonambeCRMfifandraisana amin'ny mpanjifafitarihana fisamborana hetsikamitarika fikarakaranaautomation marketingfivoriana fisamboranaocrfanekena toetra optika
Aza atsahatra ny fampitahana ny fitsikilovana NSA amin'ny Marketing